Apple inotaurirana zvinyorwa zvinyorwa mimhanzi yekushambadzira sevhisi | Ndinobva mac
Apple ichiri kutaurirana nemakambani ekurekodha yeayo mimhanzi yekushambadzira sevhisi pamberi peWWDC 2015
Jesu Arjona Montalvo | | Apple Music, Noticias, Rumo, dzakawanda
Imwe yenyaya dzanyanya kutaurwa pamusoro penyaya mukati memavhiki aya kwave kuvandudzwa mimhanzi yekufambisa sevhisi yekambani Beats. Sezvo zvinhu zvakamira izvozvi, zvinotarisirwa zvikuru kuti Apple ichaunza iyo "mimhanzi yekushambadzira sevhisi" gore rino, kunyanya kuWorldwide Developers ConferenceWWDC 2015), iyo yakapihwa uno Muvhuro, Chikumi 8, sekuziva kwedu tese. Nekudaro, sezvakaratidzwa mumushumo mutsva uchangobva kuburitswa na 'Bloomberg', Apple ichiripo iri muhurukuro nemhando dzakasiyana dzemimhanzi, avo vari kuyedza kutaurirana mazwi eiyo inotevera yekufambisa sevhisi.
Mukukosha, kana chirevo chiri chechokwadi, saka zvinyorwa zvacho zviri kutaurirana neApple, kuti vawane mazwi anovabatsira. Parizvino, rekodhi makambani anogamuchira akatenderedza iyo 55 muzana yeSpotify uye mamwe masevhisi ekushambadzira masevhisi (ekutanga mwedzi mitatu yePrimiyamu ye € 0,99 uye mushure me € 9,99 / mwedzi chete, paSpotify), nepo vaparidzi vanowana 15%.
Iwo makambani rekodhi arikutsvaga chidimbu chakakura chepayi, uye ivo vanoda kuwedzera purofiti, kupfuura yavanowana neSpotify Ltd.
Munguva yakapfuura, zvaive nerunyerekupe kuti Apple yaizopa mimhanzi yayo yekushambadzira sevhisi chete $ 7.99 pamwedzi, asi haina kusimbiswa zvachose, uye kana tikaona kuti makambani ekurekodha anoda zvimwe, ndinofunga zvichave zvakatenderedza mutengo mumwe chete seSpotify.
Apple iri kukurudzira kuvhara nhaurirano, pamberi peWWDC 2015, uye maererano neCompertino-yakavakirwa mushumo wekambani, ichiri nechinangwa chekuburitsa rwiyo rwekuimba. panguva yemusangano, kunyange vasingaregi kuva runyerekupe. Ichi chishandiso chine runyerekupe kunzi «Apple Music«, Sezvatakataura mu ichi chinyorwa.
Spotify akagumbuka nezvake "Apple tax", iyo iri muApp Store, Apple inomutsa 30% pamari yekutengesa app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple ichiri kutaurirana nemakambani ekurekodha yeayo mimhanzi yekushambadzira sevhisi pamberi peWWDC 2015
Apple iri kupinda mumisika yakawanda. Yayo yakaderera kuita mune zvimwe zvigadzirwa (iPhone), yakaonekwa kwenguva yakareba.
Iwe haugone kutora ese mabhizinesi. Kwandiri, ichi chichava kuzviparadza kwayo sekambani yemhando yepamusoro uye kuvimbika muzvigadzirwa zvayo.
Jesu Arjona Montalvo akadaro
Akanaka Alejandro, ndinofunga zvakafanana newe, muchidimbu. Ini ndinofunga kuti uyu musika unogona kuve wakakura kwazvo, uye kuti unogona kuve nechakakosha chinhu chekubatanidza, mukati mevashoma vakwikwidzi ainayo, nekuti Spotify ndiye mambo.
Chii chingave chikuru? Hongu, asi isu tiri kutaura nezve Apple, uye kana zvikauya neakanakisa idevices, uye kuunza iyo yemuno, ndiyo nzira yekutengesa, yekuwedzera. (Iniwo ndakakundikana neiyo itunes chikamu chekutevera mimhanzi maartist, uye haisi nguva yekutanga kutadza.)
Asi sekutaura kwako nemamwe mazwi, zvinogona kuve zvakanaka, asi ini handina chokwadi muchikwata.
Tichamuona neMuvhuro Alejandro, maita nekutaura kwenyu.
Pindura Jesús Arjona Montalvo
Alejandro, kana iwe usingazive, Apple yanga iri muindastiri yemimhanzi kwenguva yakareba ikozvino. Kana zvisiri, tora nzvimbo yeWikipedia uye uone kuti Sekuru Mabasa vakagadzirisa sei musika panguva iyoyo nePod.
StreamCloud, yakajeka asi inonakidza app yeVashandisi veCloudCloud
Apple inoenderera ichishongedza Moscone Center pamberi peKeynote WWDC 2015